nke kacha mma mmụta iji kụziere site n'ụlọ n'efu | Gam akporosis
Nweta akụrụngwa kachasị mma iji kụziere ụlọ n'efu na Google
Nkeji edemede nke m bu n’obi iji gosi ma gosipụta ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ niile dị ugbu a, gbasara ihe kacha mma mmụta iji kụziere site n'ụlọ.
Ihe niile ụlọ ọrụ n'efu nke Google tinyere na mkpịsị aka anyị iji mee ka ndụ anyị dị mfe, na nke kachasị, iji hụ na anyị nwere ike ịmecha ụzọ dị ugbu a n'ụzọ dị mma na-enweghị ike ịhapụ ịhapụ ya maka furu efu.
Otu ihe jikoro nke a ọtụtụ ngwa agụmakwụkwọ ma ọ bụ akụrụngwa iji kụzie ihe n'ụlọ, ma e wezụga ịbụ nke ahụ ngwaọrụ niile anyị nwere ike ịchọta site na ịpị njikọ a Anyị ga-enwe ike iji ha n'efu ka anyị nọ n'oge mgbochi, ewezuga nke ahụ, ha bụ akụ anyị ga-enweta ma n'ụdị ngwa maka gam akporo na iOS, yana n'ụdị ngwa weebụ anyị nwere ike ịnweta site na kọmputa ọ bụla ma ọ bụ Mbadamba ụrọ na-enweghị ibudata ma ọ bụ wụnye ihe ọ bụla, naanị site na ịnweta ihe nchọgharị weebụ anyị họọrọ..
Imirikiti akụrụngwa a ma ọ bụ akụrụngwa maka nkuzi anya bụ ngwa anyị niile maara nke ọma, dịka nchịkọta Google Drive na Akwụkwọ, Spreadsheets na ngosi, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ngwaọrụ ọhụrụ maka nkuzi anya dị ka Real-oge mebere whiteboard na-aza aha Jamboard, nke anyị nyegoro ezigbo akụkọ banyere vidiyo na nso nso a nke m bugoro na ọwa androidsisvideo na Youtube:
Nweta uzo zuru oke nke ihe nkuzi ulo site na ịpị ebe a.
N'ime njikọ ahụ, na mgbakwunye inwe ike ịchọta ihe niile ị chọrọ ịkụziri site n'ụlọ, Ga-ahụkwa enyemaka n'ụdị nkuzi a haziri maka ndị nkuzi, lekwasịrị anya n'iji arụ ọrụ ziri ezi na arụmọrụ nke ngwa dị iche iche Google nyere anyị.
Applicationsfọdụ ngwa ọ bụ ezie na n'otu n'otu nwere ike iyi otu, ma ọ bụrụ na anyị elee ha niile anya dị ka ngwugwu ma ọ bụ setịpụrụ ngwaọrụ, nke ahụ bụ mgbe anyị ga-enye ha ezigbo uru ha nwere yana nnukwu uru anyị ga-enwe ike ị nweta n'oge a nke ụlọnga nke anyị ka nwere ogologo agụmakwụkwọ na-ejighị n'aka na-aga n'ihu.
Ya mere, ewezuga ịnye anyị ngwaọrụ ndị dị mkpa iji nwee ike ịrụ ọrụ dị ịtụnanya nke ịnyefe ihe ọmụma anyị site n'ebe dị anya ma rụọ ọrụ anyị dị ka onye nkuzi ma ọ bụ onye nkuzi si n'ụlọ, ha na-enye anyị ndụmọdụ na ndụmọdụ ka ọrụ ntanetị a dị ka afọ ojuju dị ka o kwere mee na ezigbo mma.
Buru n'uche na ọbụlagodi na ị fụrụ ntakịrị ma ọ bụ furu efu ugbu a n'ihi na onweghị onye kwadebere gị maka mmụta mmụta digitized, nkuzi nke ga-emecha hụ ma hụ ihe a hụrụ na ngalaba a ga-abụ ọdịnihu nke agụmakwụkwọ, ị nwere ebe a kapịrị ọnụ iji kparịta ụka ma kọwaa obi abụọ gị dịka ọmụmaatụ iji ngwa ahụ iji nweta eri a #ozi nkuzi.
Ngwaọrụ enwere ike ịkụzi site n'ụlọ
Nzukọ Hangouts na jikọọ na klas gị niile na oku vidiyo na-emekọ ihe ọnụ nke ị nwekwara ike iji ngwaọrụ ndị ọzọ na-emekọrịta ihe,
Dekọọ klas gị ịkọrọ ụmụ akwụkwọ gị na-enweghị na-adabere a ufọk ufene internet njikọ.
Ndụ ajụjụ n'oge klas gị na ngwa ngosiI nwekwara ike ime ajụjụ na azịza site na iji Google Docs. Mepụta ajụjụ maka klas gị site na iji ngwa Google. Mepụta weebụsaịtị maka klas gị na sekọnd na-ebughi ụzọ mata ihe mmemme weebụ. Gbaa mkparita uka ma tinye oru ma choo mmekorita nke umu akwukwo gi na Google ClassRoom.
Na mgbakwunye na ohere ndị a niile, na ụlọ nkuzi Google, ị ga-ahụkwa nke kachasị mma Ngwa nnweta na ngwọta iji gboo mkpa pụrụ iche nke ụmụ akwụkwọ gị niile.
Ngwaọrụ dịka akpaka ndepụta okwu, olu okwu ma ọ bụ ị pụrụ ọbụna kụziere ụmụ akwụkwọ gị otu esi eji teknụzụ enyem aka G Suite, dị ka igwe okwu ma ọ bụ ngosi braille.
Mgbe ahụ anyị ga-ahapụrụ gị n'ụdị PDF faịlụ, ndị Akụzi si n'ụlọ ToolKit nke ị ga-enwe ezigbo nduzi na ndụmọdụ kachasị mma ka ị nwee ike iji teknụzụ ọhụrụ ndị a chebe onwe gị. na Google emeela ka anyị nwee ohere naanị na n'efu.
Ọ bụ n'efu maka oge dịpụrụ adịpụ ebe steeti anaghị etinye aka na steeti a nke ịnọ na Spain maka ihe karịrị otu ọnwa. Kpọmkwem site na Machị 15, 2020.
Download ebe a na PDF faịlụ Nweta akụrụngwa zuru ezu iji kụzie ihe n'ụlọ na ịpị ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nweta akụrụngwa kachasị mma iji kụziere ụlọ n'efu na Google